စီးပွါးရေးသင်ကြားမှုများ၊ အင်တာဗျူး များ၊နိုင်ငံတကာမှာ အောင်မြင်ကြော်ကြားသူတို့၏ အကြောင်းအရာများ၊ ဆောင်းပါး များအပြင် စွန့်ဦးတီထွင်သူတို့နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းများကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်တန်းရောက် အမှတ်တံဆိပ် များ အကြောင်းကိုလဲ မှတ်တမ်း ဗီဒီယို များအနေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူ အသုံးပြုရန်စာရင်းသွင်းထားသူများအနေဖြင့်လဲ မြန်မာ English နှစ်ဘာသာနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Business Academy ကိုအောင်ပါအတိုင်းစာရင်းသွင်းရယူနိုင်ပါတယ်
7028 သို့ ‘’ ON DAILY’’ ဟု SMS ပို့ပါ
7028 သို့ ‘’ ON WEEKLY’’ ဟု SMS ပို့ပါ
7028 သို့ ‘’ ON MONTHLY’’ ဟု SMS ပို့ပါ
သို့မဟုတ် http://mm.mobizacademy.com သို့သွားရောက်ပြီး ‘’Subscribe now’’ ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် အတည်ပြုတဲ့ SMS ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Business Academy ဆိုတာ ဘာလဲ?
Business Academy ကို ဘယ်လိုဝင်ရောက်ရမလဲ?
http://mm.mobizacademy.com သို့ဝင်ပါ။portalသို့ဝင်မရလျှင် အောက်ပါတို့ကိုစစ်ဆေးပါ။
တစ်ရက်လျင် ၅၀ သို့ တစ်ပတ်လျင် ၃၀၀ သို့ တစ်လလျင် ၉၅၀ ကျပ်နှုန်း ကျသင့်ပါမယ်။
Business Academy တွင် စာရင်းသွင်းထား ခြင်းဖြင့် ဘာအကျိုးများရနိုင်ပါသလဲ?
အသုံးပြုသူများအတွက်နေ့စဉ် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည့် ညှိနိုင်ဆောင်ရွက်မှု၊ စီမံကွပ်ကဲမှု၊ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်မှု စတဲ့ ပညာရပ်များ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများ အကြောင်း၊ စသည့် အခြားနေရာများမှာ မရရှိနိုင်သည့် ဗဟုသုတများကိုများကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် တစုတစည်း တည်း လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကိုလဲ သရုပ်ဖော်ဗီဒီယိုများအနေနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာ၊English ၂ဘာသာနဲ့ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။
ပင်မစာမျက်နှာ တွင် Menu ကို နှိပ်ပြီး English (သို့) Myanmar ကို ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Portal ၏ ပင်မစာမျက်နှာရှိ စာရင်းပယ်ဖျက်ရန် ခလုပ်ကို နှိပ်ပြီး ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ 7028 သို့ STOP ဟု SMS ပို့၍လည်းပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများအတွက်နေ့စဉ် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည့် ညှိနိုင်ဆောင်ရွက်မှု၊ စီမံကွပ်ကဲမှု၊ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်မှု စတဲ့ ပညာရပ်များ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများ အကြောင်း၊ စသည့် အခြားနေရာများမှာမရရှိနိုင်သည့် ဗဟုသုတများကိုများကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် တစုတစည်း တည်း လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကိုလဲ သရုပ်ဖော်ဗီဒီယိုများအနေနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းငွေလက်ကျန်မလုံလောက်ပါက စာရင်းသွင်းခြင်း အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါ။ သက်တမ်းတိုးချိန်တွင်လက်ကျန်မလုံလောက်ပါက တဆင့်နှိမ့်၍ သက်တမ်းတိုးပါမည်။ ဥပမာ လစဉ် အတွက်ဝယ်ယူထားသူအတွက် ၉၅၀ လက်ကျန်မရှိပါက အပတ်စဉ်သို့၊ အပတ်စဉ် ဝယ်ယူထားသူအတွက် ၃၀၀ လက်ကျန်မရှိပါကနေ့စဉ်သို့၊စသည်ဖြင့်။ ရက် ၃၀ ဆက် တိုက် စာရင်းသွင်းခြင်းမအောင်မြင်ပါက Business Academy စာရင်းမှအပြီးတိုင်ပယ်ဖျက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Business Academy ဝက်ဘ်ဆိုဒ် အသုံးပြုခြင်းအတွက် အင်တာနက်အသုံးပြုခ ကောက်ခံပါမယ်။